तीस नेपालीको खोजीमा विश्वभरका प्रहरी | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← जवान कुट्ने दुई सैनिक अधिकृतलाई कोर्ट मार्सल
दुई पोइकी जोईको पति व्यवस्थापन →
Posted on 18/01/2011 by जय आले | टिप्पणी छोड्नुहोस्
इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिसमा ३० नेपालीका फोटा छन् । चोरी, डकैतीदेखि हत्या र अपराधजस्ता जघन्य अपराध गरेको अभियोगमा नेपालदेखि भारत र युएईदेखि अमेरिकासम्मको प्रहरीले मुद्दा चलाइरहेको छ । तर, इन्टरपोलमा नाम राखिएकै कारण कुनै पनि नेपाली अपराधी पक्राउ परेको उदाहरण छैन । प्रहरी आफैँ भन्छ, ‘यो वारेन्ट होइन, जानकारी मात्रै भएको छ ।’
नवराज मैनाली, नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ माघ । इन्टरपोलको ‘रेडकर्नर नोटिस’मा पर्ने नेपालीको संख्या ३० पुगेको छ । जघन्य अपराध गरी फरार भएका १० जना नेपालीलाई नेपाल प्रहरी र १८ जनालाई भारतीय प्रहरीको प्रस्ताबमा रेडकर्नर नोटिसमा राखिएको हो । एकजनालाई युएई र एकजनालाई अमेरिकाको प्रस्ताबमा इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिसमा राखेको हो । नेपाल प्रहरीको प्रस्ताबमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएकाहरूमा अंगवीर बोहरा, राजु थापा, केशव दर्लामीमगर, गोकुल गिरी, भूपेन्द्र खड्का, विष्णुबहादुर लामा, रामबहादुर तामाङ, जगदीश चन्द, रियाज फाकिर, भक्तबहादुर लामा छन् ।
उनीहरूमध्ये राजु थापा, केशव दर्लामी र गोकुल गिरी डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरीको अपहरणमा संलग्न फरार अभियुक्त हुन् । अपहरणका नाइके सिद्धार्थ लामालाई पनि इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो । तर, उनी दुई वर्ष पहिले नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
रेडकर्नर नोटिस जारी भएकामध्ये अर्का अंगवीर बोहरा ६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरी फरार अपराधी हुन् । रानीशिखर दार्चुलाका बोहराले ६ वर्षीया बालिकालाई चकलेट दिई फकाएर घरनजिकै रहेको जंगलमा लगी बलात्कार गरेका थिए । ०६१ मंसिरमा भएको घटनामा फरार रहँदै आएका बोहरालाई ०६५ जेठमा इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो । त्यसैगरी भक्तबहादुर लामा, रामबहादुर तामाङ र विष्णुबहादुर तामाङ वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै सयौँ नेपालीलाई ठगेर फरार भएका हुन् । युरोपलगायत विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै दुई करोड १० लाख उठाएर उनीहरू भागेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भूपेन्द्र खड्का पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै चार करोड ५० लाख ठगेर फरार छन् । अमेरिकालगायतका देशमा आकर्षक जागिरमा पठाइदिने भन्दै उनले सयौँ युवा ठगेको प्रहरी दाबी छ ।
रेडकर्नरमा रहेका अर्का अभियुक्त जगदीश चन्द सञ्चारकर्मी जमिम शाहको हत्यामा फरार छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिएसपी चन्दले जमिमको ’boutमा महत्त्वपूर्ण सूचना दिएर हत्यारालाई सहयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । गत पुस १४ मा उनको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको हो ।
त्यसैगरी बुटवलमा तारानाथ बोहराको हत्या गरेर रियाज फाकिर फरार छन् । तीन वर्ष पहिले रूपन्देहीमा फाकिरले गणेश धोबी, विजय यादवलगायतको सहयोगमा बोहराको हत्या गरेका थिए । त्यसैगरी भारतमा अपराध गरेको अभियोगमा १८ जना नेपाली पनि इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिसमा छन् । लुटपाटदेखि अपहरण र हत्यासम्मका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ती नेपालीको नाममा भारतीय प्रहरीको प्रस्ताबमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको हो ।
भारतीय प्रहरीको प्रस्ताबमा चित्र (इन्द्र) बहादुर साउद, हरिहर भुसाल, चावाङ, गोकुल लाग्या, देवी ओली, पदमबहादुर, तुलाराम बहादुर, विपिन विष्ट, भीमे दमाईं, नान्नु मगर, शिवराज शर्मा, खुमराज थापा, कृष्णप्रसाद ओमांगी, राजेश चत्तरी, श्री अजय राई (सुनील राई), वीरेन्द्रबहादुर थापा, राजेन्द्रबहादुर (डोलबहादुर) शाही र चकर सिंह छन् । भारतीय प्रहरीको अनुरोधमा रेडकर्नरमा राखिएका केही नेपालीको नाम अपुरो र अस्पष्ट छ ।
हरिहर भुसाल भारतमा नक्कली सरकारी कागजात बनाउनेजस्ता धन्दामा सक्रिय भई फरार रहेको इन्टरपोलको सूचनामा उल्लेख छ । तिब्बतीय मूलका नेपाली चावाङमाथि नेपाल र भारतमा दुर्लभ वन्यजन्तुको ओसारपसार गरेको आरोप छ । संगठित अपराधमा दोषी मान्दै उनीविरुद्ध भारतको दिल्ली उच्च अदालतले वारेन्ट जारी गरेको थियो ।
बझाङ घर भएका लोग्या गोकाई भारतका विभिन्न ठाउँमा लाखौँ चोरी गरी फरार छन् । उनलाई बेंग्लोर अदालतले वारेन्ट जारी गरेको थियो । हैदरावाद अदालतले वारेन्ट जारी गरेका पदमबहादुरलाई पनि चोरी अपराधमै इन्टरपोलले नोटिस जारी गरेको हो ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ११ नेपालीलाई भारतका विभिन्न अदालतले वारेन्ट जारी गरेपछि भारतीय प्रहरीको अनुरोधमा उनीहरूलाई रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा त्यसरी रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएका नेपालीमा चित्र इन्द्रबहादुर साउद, तुलारामबहादुर, भीमे दमाईं, नान्नु मगर, शिवराज शर्मा, श्रीअजय राई, चकर सिंह, राजबहादुर शाही, खुमराज थापा, विपिन विष्ट, कृष्णप्रसाद ओमांगी छन् ।
त्यसैगरी इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएकी एक मात्र नेपाली महिलामा देवी ओली छिन् । भारतमा अपहरण अपराधमा संलग्न भई उनी फरार रहेको इन्टरपोलले जनाएको छ । राजेश चत्तरी पश्चिम बंगालमा विभिन्न ठूला चोरीमा आबद्ध भई फरार छन् । अर्का गुरुङ थरका नेपालीमाथि पनि भारतीय प्रहरीको प्रस्ताबमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी प्रहरीको प्रस्ताबमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएका नेपाली पंकज जोशी हुन् । अध्ययननका लागि अमेरिका गएका जोशीले एक अमेरिकन महिलालाई १० लाख डलरको चिठ्ठामा ठगी गरेका हुन् । जोशीले सात लाख ५० हजार डलर बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको खातामा पठाएका थिए, पैसा राष्ट्र बैंकले रोकेको छ, तर जोशी पक्राउ परेका छैनन् । विल्ली विल्लास नाम गरेकी महिलालाई १० लाख डलरको चिठ्ठा परे पनि जोशीले चिठ्ठा परेको छैन भनी महिलालाई झुक्याएका थिए । उनले महिलाको चिठ्ठा लिएर १० लाख डलर हात पारेका थिए ।
त्यसैगरी संयुक्त राज्य इमिरेट्सको प्रहरीको प्रस्ताबमा पनि एक नेपाली रेडकर्नर नोटिसमा परेका छन् । नामचन्द्र (?) नाम्चु युएईमा दर्जनौँ व्यक्तिसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाई फरार भएका थिए ।
किन प्रक्राउ पर्दैनन् ?
ठूला अपराधमा फरार रहेका र फेरि पनि अपराध गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सामान्यतया रेडकर्नर नोटिसमा राख्ने गरिन्छ । तर, नेपाल प्रहरीको प्रस्ताबमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएका धेरै अभियुक्त पक्राउ पर्ने गरेका छैनन् । पक्राउ परेका केहीलाई नेपाल प्रहरीले आफैंले पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशक डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी रेडकर्नर नोटिस वारेन्टभन्दा पनि सूचनाको रूपमा सीमित रहेको बताउँछन् । सुपुर्दगी सन्धि हुन नसेकाले पनि रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर पक्राउ गर्नर्े काम प्रभावकारी हुन नसकेको डिआइजी भण्डारीको भनाइ छ । सन्धि नभएसम्म विदेशमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई दोस्रो देशले बुझाउने बाध्यता छैन ।
‘रेडकर्नरमा सूचना जारी गरेर मात्र हुँदैन,’ डिआइजी भण्डारी भन्छन्, ‘पक्राउ गर्न पनि प्रहरी सक्रिय हुनुपर्छ ।’ रेडकर्नरमा रहेका अभियुक्तलाई खोज्ने प्रहरीको कुनै विशेष टिम छैन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले त्यस विषयमा टिम बनाएर काम गर्न लागेको डिआइजी भण्डारीले बताए ।
नेपाल प्रहरीसँग त कतिजना नेपाली रेडकर्नर नोटिसमा छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन । नेपाल प्रहरीकै प्रस्ताबमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पनि गलत सूचना राखिएको छ । इन्टरपोलको सूचनामा सिद्धार्थ लामा र मिलन लामालाई अझै रेडकर्नर नोेटिसमा राखिएको छ । जब कि सिद्धार्थ दुई वर्षअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् भने मिलन दुई महिनाअघि पक्राउ परेका थिए । नेपाल प्रहरीका इन्टरपोल शाखाका प्रमुख डिएसपी केदार रजौरेले मिलन लामालाई रेडकर्नरबाट हटाउन इन्टरपोललाई पत्र पठाइसकिएको बताए । तर, सिद्धार्थ पक्राउ परेको’bout आफूलाई समेत जानकारी नआएको उनले बताए ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीकै पूर्वडिएसपी रहेका जगदीश चन्दको फोटो उपलब्ध नभएको उल्लेख छ । जब कि पछिल्लो समयमा अवकाश पाएका प्रहरीको फोटोसहित सम्पूर्ण तथ्यांक प्रहरीमा हुनुपर्छ ।